Kaningi kuyenzeka ukuthi umuntu ngempela isikhathi eside libuhlungu leyo nkinga. Futhi ziphathelene kuvele akusebenzi. Ngokwesibonelo, umphimbo njalo obukhulu. Izizathu, kanye nezindlela ukuqeda inkinga ezichazwe kulesi sihloko.
Ekuqaleni, kudingeka siqonde ukuthi kungani kungaba like. Uma umphimbo obuhlungu njalo, kungase kube nezizathu okulandelayo:
Isenzo yalezi Amagciwane ezifana amagciwane namagciwane.
Isenzo we umfutho, ehlala imvelo bangaphandle. Lokhu kungase kube intuthu ugwayi, iziphuzo ezibandayo nokunye ukuphuza. D.
nokusebenza kwengqondo. Ngokuvamile nendikimba lesi sifo kanye zinkinga uyimbudane. Ngokwesibonelo, ingane ingase ubuhlungu emphinjeni wakhe njalo, uma ingane akukona ufuna ukuya enkulisa noma esikolweni.
Nokho imbangela ubuhlungu ngokuyinhloko ezihlukahlukene izifo ezibangela lokhu uphawu edabukisayo.
Isikhathi esining impela ubuhlungu ophikelelayo emphinjeni kubangelwa angina. Isifo esithathelwanayo, lapho umphimbo obuhlungu unamandla kakhulu futhi kunikeza ngokuvamile endlebeni nentamo, amalaka elikhanyayo (a sifo kuthiwa namathansela acute). Mhlawumbe koqweqwe amalaka. Nokho, it is waphawula kuphela endabeni ubovu namathansela. Lapho viral isifo kuhlaselwa the nezindlala lingekho. Nokho, amalaka kunjalo abavusa futhi ube ukuma encane round amabhola. Lahla inkinga Kulezo zimo, ungasebenzisa imithi. Ukususa kungcono ukusebenzisa ejenti elwa namagciwane "rivanola", "Furatsilinom". Lozenges ukuthi zenzelwe okudambisa ubuhlungu emphinjeni - "Falimint", "Valium". Futhi izifutho ofanele "Joks" emphinjeni "Orasept".
Kulokhu, umphimbo obuhlungu iba bomvu, elikhanyayo ulwelwesi lwamafinyila ke. Ubuhlungu Kulokhu akuyona eliqinile, Nokho, kuvame kuhambisana tickling. Esikhathini izimpawu zingase zinyamalale ngokuphelele, noma ngangokunokwenzeka ukufiphaza ngenkathi ethatha ukudla okushisayo noma uketshezi ashisayo. Nokho, ngokusebenzisa isikhathi, futhi wabuya. e pharyngitis acute ku kususwa udonga lwangemuva amalaka Futhi ingaqoqwa isikhwehlela ezishintshe umbala okuyinto kuphakamisa ukukhwehlela. Ukwelashwa ukusetshenziswa wendawo, okusho langempela izibhebhe ezazisezandleni nomphimbo obuhlungu, isibonelo, "Strepsils" izifutho "Ingalipt" noma "Kameton". Qiniseka ukuthi uxubha nabenzeli isinqandakuvunda, njengokuthi "Iodinol" noma "Furatsilinom".
Isikhathi esining impela ngisezinhlungwini ke kuphakamisa ezingamahlalakhona umphimbo obuhlungu, okusho namathansela noma pharyngitis at Usuqhubekile. Symptomatology akuyona evelele ngakho, kodwa kukhona ngesikhashana eside.
Uma umuntu njalo umphimbo obuhlungu, izizathu angase ame emzimbeni asabela iguliswa ezishukumisa ezithile. Nge le nkinga ngaphezu umphimbo obuhlungu futhi kungenzeka edema laryngeal, lacrimation waphawula, ngezinye izikhathi kubanda. I allergen kungaba uthuli, impova, dander isilwane, noma ukudla. Kulokhu, ubuhlungu, umphimbo wami izobanjelwa, uma behlukene isenzo allergen. Kungenzeka futhi ukuba bamukele ezifana ejenti antiallergic njengoba «L-CET", "Tsetrin".
Uma umuntu umphimbo obuhlungu ekuseni, kungaba kome emoyeni egumbini. Ukungabi umswakama kalula acasuke nolwelwesi lwamafinyila, okuyinto kuphakamisa ubuhlungu. Kufanele kuqashelwe ukuthi le emoyeni elomile - esiphelele zizalela emhlabathini ngoba amagciwane namagciwane, okuyinto elula ukungena ngalo ingaphakathi ngomlomo kumuntu. Ngakho uma ekuseni umphimbo obuhlungu, udinga ukuthi ucabange ngalokhu Igumbi humidification. Lokhu kungenziwa noma esebenzisa amadivayisi ezikhethekile - humidifiers, noma enye usebenzisa njalo yokuhlanza elina angabiki njalo egumbini.
Uma umphimbo obuhlungu njalo, kungenzeka izizathu abacathama izimila. Ngokuvamile basuke isebenze amalaka. Ubuhlungu njalo, okungase ekugcineni ikhule. Kumzwisa ubuhlungu nje kuphela ukudla, kodwa ngisho ukukhuluma. Kungaba ukuthi bavote ukuze ushintshe. Kulokhu, kungcono ukusetshenziswa njengoba inkinga kungatholakala. Ngempela, kulesi simo lula kakhulu futhi ngokushesha kunokuba ungakwazi ukubhekana naso.
A kancane mayelana nezingane
Uma ingane yakho ine umphimbo obuhlungu sonke isikhathi, kungase kube izizathu lokhu eziningana:
Lesi sifo, okuyinto nje kwavela futhi athuthukiswe.
Imiphumela yalesi sifo.
Isici Psychological lapho ubuhlungu izaba uyimbudane hhayi ukwenza izenzo ezithile. Kulokhu, ukuqaleka empeleni kwenzeka, kodwa bebodwa ngokuhamba kwesikhathi. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuleli cala ngokuvamile kuyadingeka.
Ukukhuluma izingane, lapha siphawula ukuthi ngisho nezinkinga ezincane kunazo kudingeka ufune usizo kadokotela. Phela, kungcono ukubona inkinga ngendlela efanele usaqala lapho kungaba esikhathini esifushane into esheshayo. Izingane uqoke "Grammidin", "Lizobakt", "Tandum Verde".
Izimbangela imvelo ezithathelwanayo
umphimbo obuhlungu Akukhona nje kungabangela kabi. Ngakho, ubuhlungu kwenzeka ngaphandle kobukhona yiluphi uhlobo ukutheleleka kwaba. Kulokhu, singase sibe nezizathu:
Umthwalo yezwi. Lokhu ngokuvamile kubonakala abahlabeleli, othisha, nezingane abakhamuluka eziningi.
ukucindezeleka eside phezu oropharynx. It is baphawula esimweni oral sex njalo, kanye khona eside emlonyeni into enkulu.
ukuhlukumezeka laryngeal. Ngokuvamile traumatize uqhoqhoqho izinhlanzi amathambo, isinkwa imvuthu, izinsimbi ezincane ezicijile izinto (isib plug).
Outdoor emphinjeni ukuhlukumezeka elibangela ubuhlungu njalo. Lokhu kungase kube ngenxa yokucinana okuqhubeka isikhathi eside noma umthelela.
Ukonakalisa mucosa, okungase kube kushisa kakhulu ngesikhathi ukusetshenziswa okusamanzi noma isisi ngesikhathi lapho ephefumula.
Ubuhlungu emphinjeni isikhathi eside zingagcinwa esikhathini postoperative (isb, ngemva tonsillectomy noma ithumba kwesidumbu).
Throat ulwelwesi lwamafinyila ukucasuka ngenxa ukungenisa imithi ethile.
Imbangela umphimbo obuhlungu Ungase futhi kube ukuntuleka kwe amavithamini amaqembu A, C no-B.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, uma ubuhlungu imvelo ezithathelwanayo, ngeke ukucasulwa ukugwinya noma ukukhuluma. Kulokhu, ukuqeda izinkinga efanelekayo abancela candies, isibonelo, "Septolete", noma ngisho nje mints.
Izifo awahlobene ne izifo emphinjeni
Kufanele kuphawulwe ukuthi kubangela ubuhlungu emphinjeni kungaba ezihlukahlukene izifo, okuyinto ayixhunyiwe nale umzimba. Ngakho, ngokwesibonelo, ungase wacasuka emphinjeni ukudla Reflux gastro-oesophageal. Kulokhu, okuqukethwe isisu emphinjeni angase aphume whereupon it kwenzeka ukucasuka of juice esiswini.
Kufanele ngikuxoxele Sokhozi syndrome, lapho iba imbangela isici yokwakheka emphinjeni womuntu. Kulokhu, isiguli inqubo eside kakhulu styloid. Lokhu kuphumela ukukhuthazwa kwalapho, okubangela ubuhlungu njalo.
ukungakhululeki futhi emzimbeni bungabangela dystonia semithambo, osteochondrosis wesibeletho, neuralgia.
Imibuthano Dark ngaphansi kwamehlo: imbangela
Umshini Assenizatorskaya kanye nokusebenza kwayo
I-Supercars "ku-GTA 5". Ungathola kuphi "i-Bugatti" ku "GTA 5"?
Samsung ML-1641: enyathelisa kakhulu ukusetshenziswa ekhaya